Melissa officinalis kuyinto imbiza nge ezimnandi lemon iphunga. Toothed eshiya okusikhumbuza amahlamvu raspberry noma strawberry. Lesi simila isebenzisa amahlamvu umuntu, labo bayahamba kusukela phezulu ekuqaleni izimbali.
Melissa iqukethe ukubunjwa yayo amafutha abalulekile, ke ulunika nephunga. Amafutha Melissa wusizo yisimiso senhliziyo nemithambo yegazi. Ukufaneleka, nazo zonke izifo zalo izoba wusizo itiye noma ukumnika zalesi sitshalo. itiye phisa kusuka lemon namafutha, ngisho noma une azikho izinkinga zempilo. ukunambitheka kwakhe okuhle okusikhumbuza itiye lemon, kodwa ukunambitheka lemon namafutha ethambile futhi bube mnandi ngokwengeziwe.
Melissa izidakamizwa kwehlisa umfutho wegazi, ngakho-ke qaphela nge reception yayo, uma umfutho wegazi lakho isivele ongaphakeme. Ngu uqobo, lokhu imbiza kuyinto analgesic, kusiza amajaqamba futhi colic. Ukwamukelwa melissa ngefomu iluhlaza noma ezomisiwe kakhulu wusizo isimiso sezinzwa - utshani kunomphumela ukuzola. Ngaphandle kwakho konke lokhu okungenhla, itiye Melissa kusiza ukubuyisa nokuhlanza. Futhi, kodwa kukholakala ukuthi lesi sitshalo kwandisa isifiso sokudla, ngakho-ke kungase kube usizo kulabo abafuna ngcono. Uma, kunalokho, ufuna ukunciphisa umzimba, bese qaphela ukuthatha yiluphi uhlobo. Zama Yiqiniso, uma kunesidingo, kodwa namanje ukubukela iphango. Uma uqala avuke - kuzodingeka ukuba bangayeki lesi sitshalo, Nokho, isimo sethu futhi Pharmacy ejenti ocebile phytotherapeutic.
Of lemon namafutha imbiza wenze utshwala tincture, eye yasetshenziswa ngempumelelo massage and ukuzihlikihla. izifo zesikhumba trituration letiphakanyisiwe wokuthoba kanye ukulibopha, okuyinto ziwusizo futhi imihuzuko. Labo ababhekene nalesi sifo, uyazi ukuthi kunzima kangakanani ukuba ayibulale, nokuthi futhi eside ngezinye izikhathi ukwelashwa nzima kwenzeke.
Uma une isifo periodontal, ungakwazi batusa decoction for uhlambulule izinsini. Ngenxa yalesi namafutha uphawu, mhlawumbe fresh.
Uma ungathandi itiye uMelissa, kungenzeka ukwengeza ambalwa itiye elivamile eshiya wakhe. Lokhu kuzokwenza ukunikeza ukukhanya lemon ukunambitheka, kodwa ngaphandle acid. Ekhaya engadini noma yini ezweni okulo khulula futhi kulula ukhule lokhu imbiza emangalisayo ezakhiweni zalo. kulinywe yayo akuthathi isikhathi esiningi futhi ayidingi bachitha amandla. Kodwa ehlobo ungakwazi nsuku zonke ukuze basuse amahlamvu esihlwabusayo ukuzisebenzisela itiye noma ngezinjongo zokwelapha. Phela, lokhu utshani emnandi ukunambitheka ngokwayo, kungenzeka ngqo njengoba injalo iluhlaza, ngaphandle ukuthi ukugeza, nakuba lokhu ngempela engadini yabo cha.
Ngo Ukraine, namafutha Kudume kubhekiselwa kuye ngokuthi "unina oludakayo '. Kukholakala ukuthi igama kwamnikeza isizathu - kuhle awukudla izifo esifazane uhlelo zokuzala. liphinde usizo olukhulu kusukela esikhathini okubuhlungu.
Abelapha batusa lokhu imbiza ngoba migraines, ukuqwasha ngisho anda excitability ngokobulili. Sebenzisa ngayo ezihlukahlukene izifo futhi waqaphela njengoba izidakamizwa ezinhle emazweni amaningi. Nasi utshani sici-ocebile anegama elihle Melissa. Amandla ayo kanye abafuyi bezinyosi wabona ukuthi lo msebenzi wakhe onzima usebenzisa amafutha abalulekile zalesi sitshalo. Amafutha isetshenziswa amakha - kukhona bubaluleke kakhulu kunalokhu.
Ngathola ukusetshenziswa kwalo amakhambi ekuphekeni. Njengoba condiment kanye nesiqholo Fresh noma omisiwe lemon namafutha isetshenziswa izitsha of Europe kanye ukudla okuhlukahlukene Arabhu. Kufake salads, amasobho kanye njengendlela isithokelo for inyama kanye nenhlanzi izitsha.
Enye igama laleli imbiza - Mint lemon. Thola ngokwakho gryadochki kancane nge isitshalo omangalisayo - futhi uyoba isinongo kakhulu, izidakamizwa ngempumelelo nemifino nje enhle ukugcina yobujamo ithoni.
Tea Purple "Chang Shu": ukubuyekezwa odokotela. Kanjani na? Izimo
Tea White Amaqembu Its main
Izindlela ukubeka ividiyo ku-inthanethi
Ukulungisa inja ukuziphatha: izindlela ukuqeqeshwa inja
Gap - kuyinto ... Ukuhweba Strategy esekelwe Gap
"Igumbi Cafe", Ekaterinburg: isevisi kanye Google +
Ekuseni, nomlomo owomile: Izimbangela, imiphumela kanye nokwelashwa
Kuyini ikhadi lesikweletu, futhi lapho uludinga